Musharax Eng.Axmed Macalin Fiqi oo magaalada Gaalkacyo si weyn loogu soo dhaweeyay “Sawirro” – Radio Muqdisho
Musharax Eng.Axmed Macalin Fiqi oo magaalada Gaalkacyo si weyn loogu soo dhaweeyay “Sawirro”
Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah musharixiinta u taagan qabashada maamulka la filayo in laga hirgeliyo gobollada Mudug iyo Galguduud ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib markii uu ka ambabaxay magaalada Muqdisho.
Musharax Fiqi ayaa markii uu garoonka ka degay waxaa halkaasi kusoo dhaweeyay odayaal,haween,dhalinyaro iyo mas,uuliyiin katirsan maamulka Galmudug iyadoo intaa kadibna munaasabad lagu qabtay gudaha magaaladaasi uu kula hadlay boqolaal kamid ah dadka reer Galmudug kuwaasoo taageersan musharaxnimadiisa.
Munaasabadad soo dhaweynta Amb.Fiqi ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga maamulka Galmudug Axmed Maxamuud Xassan Baasto oo sheegay in mas,uulkani yahay halyeey howlo badan usoo qabtay dalka iyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ka xoreynta argagaxisada ee magaalada Muqdisho iyo gobollada kuyaala koonfurta qaarkood.
Mudane musharax Axmed Macalin Fiqi ayaa khudbad uu kula hadlayay dadka ku nool gobollada dhexe waxa uu ka jeediyay munaasabadiisa isagoo balalan qaaday in dadku ay dareemaan isbedel dhanka amniga ah iyo horumarin ay u simanyihiin dhamaan degmooyinka iyo gobollada hoos imaanaya maamulka la dhisi doono.
Dhinaca kale Axmed Macalin Fiqi ayaa ugu baaqay musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka gobollada dhexe inay yeeshaan iskaashi ku aadan in aanan khlalaase ka dhicin deegaanada inta ay socdaan shirarka maamulka mideysan loogu dhisayo Mudug iyo Galguduud.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in gobollada dalkeena laga hirgeliyo nidaamka federaalka oo ku qoran dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya waxaana la filayaa in maamulkan uu ka mid noqdo dowlad goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliya
Kulan Lagu Taageerayay Maamulka Loo Sameynayo Gobolada Dhexe Oo Dedmada Balanbal Lagu Qabtay
Culumaa’udiinka Ahlu Sunna oo Nairobi Ku Qabtay Munaasabad Ay ugu Diyaar Garobayeen Dhalashada Nabigeena Muxamed NNKH “Sawirro”
Culumaa'udiinka Ahlu Sunna oo Nairobi Ku Qabtay Munaasabad Ay ugu Diyaar Garobayeen Dhalashada Nabigeena Muxamed NNKH “Sawirro”